Momba anay - Huizhou Aimsea Newway Technology Co., Ltd.
Ny orinasa dia nanolotra tanteraka ny tsipika famokarana mandeha ho azy sy ny rafitra fitantanana ERP, ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001-2015, ary manana laboratoara fanatsarana avo lenta 50 sy ivon-toeram-panadinana ho an'ny spectrometers, rheometers, QUV ultrafiolet fahanterana, sns., Ny mari-pamantarana "AIMSEA 志 海" dia nomena ny mari-pamantarana malaza amin'ny Faritanin'i Guangdong. Ny vokatra azon'ity orinasa ity dia nahazo ny "vokatra vaovao manan-danja amin'ny faritanin'i Guangdong 2009" sy ny "2010 Award ho an'ny fikarohana sy ny fampandrosoana mahaleo tena ny faritanin'i Guangdong". Nanomboka ny taona 2011, nahazo ny mari-pahaizana nasionaly teknolojia avo lenta mandritra ny telo taona ny orinasa ary nahazo ny mari-boninahitra "Enterprise Credit Evaluation AAA Enterprise" sy "2014 Guangdong Excellent Credit Enterprise". Ny orinasa dia nanao fanavaozana ny fizarana tamin'ny 2015 ary voatanisa tamim-pahombiazana tao amin'ny "National SME Equity Trading Center" tamin'ny volana martsa 2017, kaody stock 870684.
Taorian'ny asa mafy an-taonany maro, ny marika "AIMSEA" dia nankatoavin'ny tsena sy indostria anatiny sy ivelany. Ny vokatra AIMSEA dia nandalo ny ROHS EU, nahatratra ny fanamarinana ary manome tatitra momba ny fiarovana MSDS. Ny mpanjifa lehibe dia mifantoka amin'ny mpanamboatra PVC tsara voatanisa eto an-tany. Ny fivarotana varotra tonga lafatra dia mandrakotra faritany mihoatra ny 20 any Shina, ary nanondrana firenena efa ho 20 sy faritra toa an'i Eoropa, Amerika atsimo, Moyen Orient, Japon, Azia atsimo atsinanana, sns. Anisan'ireo tsara indrindra ao amin'ity orinasa ity ihany izy io ary nanjary marika niavaka teo amin'ny sehatry ny indostria ary mpitarika ny stabilisers PVC tsy misy poizina sy tia tontolo iainana.
Ny profesorantsika. Yifeng Andrew Yan, injenieran'ny Seinor PVC efa 35 taona mahery, nianatra momba ny simia sy ny fitaovana nanomboka tamin'ny 1982;
Mifantoha amin'ny sehatry ny stabilizer ny tontolo iainana PVC sy ireo fitaovana novaina PVC.
Namorona patanty maherin'ny 30, patanty 13 no voasoratra soa aman-tsara tao Shina.
Nandresy NO 1. Loka ara-teknolojian'ny provansy Hunan tamin'ny 1989 "Tetikasa novaina plastika PVC / ABS", tamin'ny 1991 "Lubricant avo amin'ny fitaovana polyformalehyde".
Mpanoratra ny boky 《Plastilisatera Teknolojia sy Applications》.
Nanampy ny tetikasan'ny mpanjifa 500, nanokana ny asany amin'ny Additives momba ny tontolo iainana manerantany.
Ny departemanta R&D anay dia misy injeniera profecssional 25 sy manam-pahaizana momba ny teknika any amin'ny faritra maro. 22 taona traikefa amin'ny fikarohana sy ny serivisy ara-teknika ho an'ny additives PVC .Ny departemantan'ny varotra anay, dia manana traikefa an-taonany maro, traikefa fiaraha-miasa mahomby amin'ny orinasa anatiny sy ampitan-dranomasina, ny ekipa Aimsea dia mijoro amin'ny eritreritry ny mpanjifa, manomboka amin'ny fonay, vahaolana namboarina, raikipohy nohavaozina, kalitao milamina ary mitohy ny serivisy teknika ho an'ny mpanjifa mamorona lanja bebe kokoa, avy eo manangana toe-javatra maharitra mandresy, satria mpamatsy vahaolana PVC izahay.
Stabilizer tsy misy poizina Pvc, Pvc Additives, Pvc Heat Stabilizer ho an'ny Flexbile, Pvc Heat Stabilizer, Pvc Stabilizer, Pvc One Pack Stabilizer,